578s Ndụ Crazy N&#39;ime Miami Mega Jail images and subtitles
E boro gị ebubo ime mpụ siri ike ị na-ekwusi ike na ịmeghị. Ọ dịghị onye aka ya dị ọcha ruo mgbe egosiri ikpe eziokwu, mana ụbọchị ikpe ahụ nwere ike iwe obere oge abata. N'ime oge a, ebe obibi gị ga-abụ ihe a na-akpọ Miami Mega Jail. You're ka bu nwata, i ghaghi igba n before ulo mkporo tupu i buru onye isi ike, ya mere ewega gị n’ala ebe a ga-ebi gị ya, ikwenyeghi n’ihe ị na-ahụ. Ahịrị ọnụ ụlọ jupụtara na ụmụ nwoke, na-eti mkpu, na-eti mkpu, na-abịa n'ụlọ mmanya ma na-eyi egwu gị. Ọ bụ ọgba aghara kpamkpam. Ndi echere gi n’ime ulo aka a bu komputa nke umu nwoke iri di obi, iwe di ndu. No maghị ndị a egwu, mana ị ga-alụ ọgụ, emehiekwa ihe nke ahụ. Just banyela ebe a na-egbu mmadụ. O siri ike ịhọrọ nke bụ ụlọ mkpọrọ kacha njọ na USA n'ihi na ọ dị mwute na enwere ọtụtụ Ebe ndị nwere ike ịsọ mpi ka ọ bụrụ elu, ma ọ bụ ikekwe, anyị ga-ekwu ala, nke ndepụta ahụ. Onye ọbụla nọrọla ebe anyị ga-ekwu maka ya taa agaghị ewe iwe anyị ahọrọla ya dịka nke kachasị njọ, nke ahụ bụ n'ezie. Anyị kwesịrị ikwu na ọ bụrụ n’ị na-agwa ndị omekome obi tara mmiri n ’ụlọ mkpọrọ na apụla n’ụlọ mkpọrọ na ụlọ mkpọrọ, ha ga-agwa gị ugboro ugboro na ụlọ mkpọrọ ka njọ. Ọtụtụ mmadụ na-ekwu na mkpọrọ bụ unyi karịa ụlọ mkpọrọ na ọtụtụ ihe ike. Akpọla ebe anyị na-ekwu maka ya taa, “Hel na Paradaịs”, ma ọ mụchaa nyocha anyị anyị agaghị ekwenye. Ihe anyị na-ekwu n'ezie bụ akpọrọ “Mmezi na Mmezigharị Miami-Dade Ngalaba ”, nke mejuputara n'ezie ọtụtụ nkeji gụnyere ama ama ama ama. Ndị ahụ agaghị abanye n'ogige ahụ ga-anọ n'ụlọ mkpọrọ, ụfọdụ n'ime ha ka nọkwa n’oge ha dị afọ iri na ụma. Ogige Boot bụ akụkọ ọzọ, ma anyị ga-ekwu ma e jiri ya tụnyere nga ma ọ bụ ogige ezumike. Usoro ahụ dum dị ihe dị ka mmadụ 7,000, ọ bụ ezie na ihe dị ka 114,000 ebi akwukwọ ga na-agabiga na ọnụ ụzọ kwa afọ - nke ahụ bụ ihe dịka 312 kwa ụbọchị. Nke a bụ ebe ọrụ juru, nke ahụ bụ n'ezie. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụ naanị ụlọ mkpọrọ 7th kachasị ukwuu na United States. Imirikiti ndị mkpọrọ agaghị anọ ogologo oge ebe ahụ, oge nkezi na sistemụ niile bụ naanị ụbọchị iri abụọ na asatọ, ma ị ga-ahụ ndị mmadụ ndị cherela ikpe ikpe ogologo oge afọ ise. Nke a na-ewetara anyị n'otu n'ime nkeji, otu ebe na-adaba n'isi akụkọ kachasị n'ihi ajọ ọnọdụ ya. A na-akpọ ya Njide Ọnwụnwa, ma ọ bụ oge ụfọdụ ana - akpọ ya Main Jail. Ọ na-abụkarị ihe ruru mmadụ 1,700 n'otu oge. Imirikiti ndị mmadụ nọ ebe ahụ ka bụrụ ndị nyochaghị akwụ ụgwọ ebe ọ bụ na egosighi na ha mere eme ikpe mara, mana ichere ụbọchị ikpe ahụ nwere ike were ọtụtụ afọ. Ọ dịghị mfe idozi mgbe ụdị limbo a dị, ma ọ bụrụ na ị na-agafe sel ndị ọzọ ala ụfọdụ ị ga-ahụ etu ihe siri gbasa. O nwere ndị mkpọrọ kwụsịrịla ịlụ ọgụ maka ikpe ha maka na ha chọrọ naanị ịnweta pụọ ebe ahụ, na-emeghị ihe ọjọọ ma ọ bụ na ọ nweghị, ha chọrọ ịbanye n'ụlọ mkpọrọ. Ala ndị kachasị njọ bụ ebe a na-echekwa ndị omempụ kachasị dị ize ndụ na ndị ahụ ala ise na isii. Mkpụrụ ndụ ebe a na - anọkarị ebe ọ bụla site na ụmụ nwoke iri na ise ruo iri abụọ na ise, n'ime ndị otu a, enwere ụdị nhazi. Dị ka ụmụ nwoke nọ ebe ahụ na-enwe mmasị ikwu ọtụtụ ihe, ọ bụ ndụ nke kachasị mma, yabụ ọ bụrụ na ịnweghị onye na-alụ ọgụ nwere ike ịnwe oge siri ike. Chọrọ ụfọdụ ụyọkọ, ị ga-alụ ọgụ maka ya. Ọ dị mma, ị chọghị ịnwe ọnọdụ kachasị njọ na ụlọnga, mana gịnị ga - eme ma ọ bụrụ na mmadụ dị na-ewere ngwongwo gị? Dị ka otu onye mkpọrọ nọ ebe ahụ kwuru, “Ana m erigbu ndị na-adịghị ike.” Ọ bụrụ na ịlụ ọgụ maka ihe gị, ị ga-enwe ọkụ mmụọ nke oge ụfọdụ, anyị na-ekwu na ọ bụ ndị ọjọọ. Ọ bụrụ na ị gbagọọ agbagọ, a ga-eti gị ebe ọ bụla ị na-aga ọ gwụla ma etinyeghị nchekwa. Dịka onye mkpọrọ ọzọ kwuru na N'ajụjụ ọnụ ụbọchị mbụ n'ụlọ nga gị ị ga-alụ ọgụ maka na ha choro ilepu gi anya dika nwoke. Mana gịnị mere? Nzaghachi ya bụ ma ọ bụrụ na ịlụghị ọgụ ọ bụ ihe ịrịba ama na ihe adịghị njọ na gị. Eleghị anya ị bụ agwọ, maka na ịchọghị ịlụ ọgụ. Ọ dị ka enweghị ezi uche, mana onye mkpọrọ kwuru na ndị a bụ iwu, nke ahụ bụ koodu ahụ. Ihe dị mkpa bụ na ndị mkpọrọ enweghị ike ịkọwapụta nke ọma na iwu nke koodu ahụ. Otu Ihọd kọwara na ọ bụrụ na mmadụ anaghị alụ ọgụ otu otu na nrube isi nye Jehova codemata mkpụrụ ndụ niile nwere ike iti onye ahụ ihe. Mgbe ụfọdụ, a nwere ike ịpịa nwoke ihe maka obere mmejọ, yana oge ụfọdụ ọ ga-abụrịrị ebubo nke ihe ọ na-emeghị. “Lenye zuru nri m?” Ọ dịghị onye zaghachi, ike gwụkwara nke ahụ. I nweghị ike, ị ga - ata ụta. O gha eme ya, n’ihi na o ghaghi ida ihu ma o buru na o meghi. Dị ka onye ọ bụla na-ekwu na ebe ahụ, naanị ị ga - alụ ọgụ. Ha nwere otutu ukpuru ederede edeghi ede, ha nakpo, otu bu GABOS. Nke ahụ pụtara, “Egwuregwu Egosighi na Sympathy”. N’adịghị ka ụfọdụ ụlọ mkpọrọ gọọmenti etiti, o yighị ka ị ga-ewere gị n'okpuru nku onye ọ bụla. Jail bụ ụzọ gladiatorial karịa ụlọ mkpọrọ, n'agbanyeghị na anyị anaghị anụkarị ihe gbasara obi ọjọọ nke usoro mkpọrọ. Naanị banye na nnọkọ ebe ndị mkpọrọ nọbu na-ekwu maka ahụmịhe ha na mgbazi sistemu ma ị ga-ahụ ọtụtụ n'ime ha na-ekwu n'ụlọ mkpọrọ ka njọ. Ihe edoghi anya bu na otutu ndi mmadu enwetabeghi ikpe mara ma onwere ha mmoo ka njọ ma na-eche ihe egwu dị iche iche ihu. Ndị na-ebu ụzọ na-atụ ụjọ oge niile na ọtụtụ ọnọdụ ha kwesịrị ịdị; nke uche ịrịa ọrịa ịbanye na ebe ahụ; nri dị egwu; mkpụrụ ndụ ndị ahụ ruru unyi ma ha ga-anọ karịa n’oge ha n’ụlọ nga. Ga-ahụ ọtụtụ ndị mkpọrọ na-ekwu na ha ga-eme "mgbọ" naanị iji pụọ na nke ahụ helhole. Bullet bụ otu afọ n'ụlọ mkpọrọ. Kedu ihe kpatara esemokwu ga-eji bụrụ ọnọdụ ọjọọ n'ọnọdụ ụlọ, ị nwere ike ịnọ na-eche. Ọ dị mma, e keghị ha ka ha debe ogologo oge. Nsogbu a bu, obuna odi nkpa nwere ike ibu oku oku ma ndi mmadu na eme otutu ihe kar a na-egbu oge ma ọ bụrụ na ikpe ha na-egbu oge. Risonlọ mkpọrọ kwesịrị inye ụdị nkasi obi… Risonlọ mkpọrọ bụ hel na uru, ụlọ mkpọrọ na-enwe ụfụ mgbe niile na pọgatrị na akụkụ kachasị njọ ị maghị ụzọ ọ ga-esi pụọ. N'ihi nke a, ndị mkpọrọ na-abụkarị ndị obi ọjọọ, na-ewe iwe, na-ewe iwe, na mgbe ụfọdụ nzuzu dị larịị mgbe ọ gafesịrị ọnwa ọnwa-18 nke ọnwa-ọcha. Ihe niile ahụ a na-ekwu, were ya na a ga-eziga gị n'ọnọdụ ọjọọ ndị a? Ka anyi laghachitere gi na eburu gi rue ulo nke 6 na Miami. Otu onye n'ime ụlọ mkpọrọ na-apụ apụ, ndị nche ahụ ekwetakwa na ha enweghị ike ịza ya ime ihe ike ọsọsọ ịkwụsị ya. Ha kwenyere na ha hapụrụ ndị mkpọrọ ahụ na Koodu ha. Ndị nche ahụ kwuputara n’ihu ọha na enweghị ihe ha nwere ike ime gbasara nnukwu iti ihe, izu, ohi. O ghaghi ezu n'ime ha ịnọ ebe niile ma hụ ihe niile. Ozugbo onye nche ahụ pụọ, ịhapụrụ gị ịlụ ọgụ megide ala nke 5 na nke isii nke jọrọ njọ, ụlọ aja aja ochie. Mana gịnị mere? Gini mere ha adighi enwe ike idi? Otu onye mkpọrọ zara nke ahụ, na-asị, "Koodu bụ koodu ahụ." Kedu ihe nke ahụ pụtara? Ọ pụtara na ọ bụrụ na mmadụ akwanyereghị onye ị na-alụ ọgụ, ị nyara ụkwụ. Naghị eso mmadụ tụgharịa uche maka na ebe a abụghị ebe ezi uche dị na ya ị ga-amalite. Ha na-ekwu, ndị mmadụ na-abụghị n'okporo ụzọ, anaghị aghọta koodu n'okporo ámá. Kinddị okike ọdịda ọdịda anyanwụ a laghachiri n'ihe ndị sayensị kpọrọ, 'ọdịbendị nsọpụrụ. ” Na-elelị nwoke, ị na-alụ ọgụ, ị na-amịrị mma agha, were ebe iri wee gbaa. N'ime ụwa anyị, anyị sitere n'ihe a kacha wee pụta, mana n'ime ụlọ mkpọrọ Koodu a, na nsọpụrụ nke ọdịnala a, ka juputara. N'elu ohi na ịlụ ọgụ Main Jail na Miami ka akpọrọ nke kachasị njọ Na America maka ụdị mmekpa nwoke ndị ọzọ. Ihe ndị na-emenye ụjọ nwere ike ime mgbe ndị nche na-eche naanị sel n ’otu elekere. A na-ahapụkarị ndị mkpọrọ na-eri ihe dị ka anụ oriri n'etiti ndị na-eri anụ. Obi dị m ụtọ na ụlọ mkpọrọ ahụ emeela ọtụtụ ndozi n'ime afọ ole na ole gara aga, otu na-abawanye ụba arụnyere igwefoto. Mgbe ahụ enwere okwu banyere ụlọ mkpọrọ a na ọtụtụ ndị na-a drugsụ ọgwụ mmụọ. A na-alụkarị ọgụ n'ụlọ mkpọrọ mgbe onye ọrịa na-arịa ọrịa na-eme ihe n'ụzọ ndị ọzọ nọ n'ụlọ mkpọrọ ọ masịghị gị. Dị ka Marshall Project si kọọ, “jaillọ nga Miami bụ ụlọ ọrụ kachasị maka ndị isi na-arịa ọrịa uche na Florida. ” Ndị mmadụ na-arịa ọrịa ụbụrụ na-abụkarị ndị na-eri anụ, na-ejedebe na ụmụ nwoke iri abụọ na-anọdụ ala tụgharịa aka ha. Otu a ka esi ahazi ịwepu ego. N'ụbọchị ọ bụla, ụmụ nwoke na-agagharị ma na-esighị ike. Ọ dị ka ọnụ ụzọ na-emegharị ọbara, nke jupụtara n'ọbara. N’ezie, enwere otutu ihe ike nke na Ngalaba nke ikpe kwuru na Miami-Dade Ndị mkpọrọ na ndị nche na ndị nche nwere ọtụtụ ihe ize ndụ. Ihe a ga - eme, ka ngalaba ahụ kwuru. Afọ ole na ole gara n'ụlọ mkpọrọ chere ọtụtụ nyocha mgbe mmadụ asatọ nwụrụ naanị n'ime ọnwa ise. Ndi DoJ kwuru na ọnwụ atọ nke ndị nwere ọgụgụ isi na-akpaghasị nsogbu. Otu nwa nwoke nke nọ maka ịnya ụgbọ ala na-anabataghị wee banye na Satọdee wee nwụọ na-esote Mọnde. Abụọ abụọ nwụrụ n'ime otu izu, na onye kọmishọna kwuru na sistemụ a “agbajikwala.” Ọ tụgharịrị na site na mmadụ asatọ ahụ nwụrụ na otu onye esiwo na mbara ala dapụta iji gbapụ ndị mkpọrọ ndi n’eso ya n’azu iti ya ihe. A kpọkwara Knight. Mgbe ụfọdụ a na-akpọ ụlọ kachasị njọ, nke ahụ emechiwo, mgbe ụfọdụ a na-akpọ "gottenlọ Chefuru Echefu." Ọ bụ ọkwa nke iteghete ebe e debere ọtụtụ ndị nwere ọgụgụ isi. Nke a bụ ebe a na-ahapụkarị ndị mkpọrọ ma leghaara ya anya, n'ọtụtụ oge wee were ha ndu nke aka. Laa azụ n ’ụbọchị a, ndị mkpọrọ hiri ụra n’ala enweghị blanket, ọ bụ ezie na ebe ndi ogwugwu a gha eme mmadu. A hụrụ ụfọdụ ndị mkpọrọ ka ha na-a fromụ mmanya n’ụlọ mposi, ma mgbe nke a kụrụ ozi ọma ebe ahụ A na-akpọ, "egwu". Mkpu tiri mkpu ọha. Mana ka ị nụrụ, nsogbu ka nwekwara mgbe onye nwere nsogbu iche echiche gbachiri nkịtị na-ejikwa gladiators na ndị na-emegbu mmadụ n'okporo ụzọ nke oge a nke koodu ha kpachaara anya ghara inwe ụkpụrụ omume mmadụ. Ọ bụghị ala niile dị njọ dịka akụkọ anyị kwurula, na oge ụfọdụ ndị dị ize ndụ ma ọ bụ ndị na-enweghị nsogbu ga-ebi naanị ha. Ka o sina dị, kwụsie ike n'otu n'ime ụlọ ndị ahụ dị elu n'ụlọ mkpọrọ ahụ ma ị ga-ahụ kedu ka esi eme ka ejide ya na otu n'ime iwu ndị kacha sie ike n'ụwa. Enwere nsogbu ndị ọzọ, nke ụdị ịpụ iche. N’afọ 2019, ọrịa bugara mmadụ iri na asaa n’ụlọ ọgwụ ebe a n’ihi ụfọdụ ọrịa mberede. Ọtụtụ ndị ọrụ gbadakwara ya. Kedu ihe mere? Ọ dịghị onye maara n'ezie. Akpọbatara ndị agha bọmbụ ahụ mgbe achọpụtara mmiri mmiri ọzọ, mana nke ahụ tụgharịrị bụrụ ihe na-adịghị emerụ ahụ. Eleghị anya ihe kpatara ndị mmadụ bidoro na-eme mkpọtụ bụ anwụrụ ọkụ si na mmiri nsị ọgwụ. Ọ bụrụ na anwụrụ anwụrụ ọkụ na-akwụ site n'ebe dị anya nwere ike ime ka mmadụ nwee obi ọgbụgbọ gbadaa, kedu n’ụwa ha ga-anọ na-ese anwụrụ n’ebe ahụ? Nri gas? Ọ na-egosi etu esi ebe ahụ jọgburu onwe ya. Anyị ga-ahapụrụ gị ntụle nke anyị hụrụ na peeji Facebook nwere ụlọ mkpọrọ a: Nabata hel. Ọ ga-akara mmadụ mma ịnwụ kama ịta ahụhụ na ntaramahụhụ nke ịnọ n'ụlọ mkpọrọ n'ájá a na-asọ oyi, na-asọ oyi. ” Don'tchọghị ka ezitere gị ozi na Miami Jail mana ịchọrọ pịa otu n'ime mmadụ abụọ a vidiyo. Ya mere, gaa lee vidio a ugbu a maka vidiyo ọzọ dị ukwuu sitere na Infographics Show ma ọ bụ nke a n'ofe ebe a. Can nwere ike ịhọrọ otu agbanyeghị wee bulie ma gaa lee vidiyo ọzọ ugbu a!
Ndụ Crazy N&#39;ime Miami Mega Jail
< start="1" dur="4.029"> E boro gị ebubo ime mpụ siri ike ị na-ekwusi ike na ịmeghị. >
< start="5.029" dur="4.521"> Ọ dịghị onye aka ya dị ọcha ruo mgbe egosiri ikpe eziokwu, mana ụbọchị ikpe ahụ nwere ike iwe obere oge >
< start="9.55" dur="1"> abata. >
< start="10.55" dur="4.18"> N'ime oge a, ebe obibi gị ga-abụ ihe a na-akpọ Miami Mega Jail. >
< start="14.73" dur="3.93"> You're ka bu nwata, i ghaghi igba n before ulo mkporo tupu i buru onye isi ike, ya mere >
< start="18.66" dur="3.42"> ewega gị n’ala ebe a ga-ebi gị ya, ikwenyeghi n’ihe ị na-ahụ. >
< start="22.08" dur="5.45"> Ahịrị ọnụ ụlọ jupụtara na ụmụ nwoke, na-eti mkpu, na-eti mkpu, na-abịa n'ụlọ mmanya ma na-eyi egwu >
< start="27.53" dur="1"> gị. >
< start="28.53" dur="1"> Ọ bụ ọgba aghara kpamkpam. >
< start="29.53" dur="4.32"> Ndi echere gi n’ime ulo aka a bu komputa nke umu nwoke iri di obi, iwe di ndu. >
< start="33.85" dur="4.26"> No maghị ndị a egwu, mana ị ga-alụ ọgụ, emehiekwa ihe >
< start="38.11" dur="1"> nke ahụ. >
< start="39.11" dur="2.04"> Just banyela ebe a na-egbu mmadụ. >
< start="41.15" dur="4.83"> O siri ike ịhọrọ nke bụ ụlọ mkpọrọ kacha njọ na USA n'ihi na ọ dị mwute na enwere ọtụtụ >
< start="45.98" dur="4.989"> Ebe ndị nwere ike ịsọ mpi ka ọ bụrụ elu, ma ọ bụ ikekwe, anyị ga-ekwu ala, nke ndepụta ahụ. >
< start="50.969" dur="3.721"> Onye ọbụla nọrọla ebe anyị ga-ekwu maka ya taa agaghị ewe iwe >
< start="54.69" dur="2.869"> anyị ahọrọla ya dịka nke kachasị njọ, nke ahụ bụ n'ezie. >
< start="57.559" dur="3.631"> Anyị kwesịrị ikwu na ọ bụrụ n’ị na-agwa ndị omekome obi tara mmiri n ’ụlọ mkpọrọ na apụla n’ụlọ mkpọrọ >
< start="61.19" dur="3.35"> na ụlọ mkpọrọ, ha ga-agwa gị ugboro ugboro na ụlọ mkpọrọ ka njọ. >
< start="64.54" dur="3.38"> Ọtụtụ mmadụ na-ekwu na mkpọrọ bụ unyi karịa ụlọ mkpọrọ na ọtụtụ ihe ike. >
< start="67.92" dur="3.61"> Akpọla ebe anyị na-ekwu maka ya taa, “Hel na Paradaịs”, ma ọ mụchaa >
< start="71.53" dur="2.62"> nyocha anyị anyị agaghị ekwenye. >
< start="74.15" dur="4.3"> Ihe anyị na-ekwu n'ezie bụ akpọrọ “Mmezi na Mmezigharị Miami-Dade >
< start="78.45" dur="4.63"> Ngalaba ”, nke mejuputara n'ezie ọtụtụ nkeji gụnyere ama ama ama ama. >
< start="83.08" dur="3.6"> Ndị ahụ agaghị abanye n'ogige ahụ ga-anọ n'ụlọ mkpọrọ, ụfọdụ n'ime ha ka nọkwa >
< start="86.68" dur="1"> n’oge ha dị afọ iri na ụma. >
< start="87.68" dur="4.11"> Ogige Boot bụ akụkọ ọzọ, ma anyị ga-ekwu ma e jiri ya tụnyere nga ma ọ bụ >
< start="91.79" dur="1.14"> ogige ezumike. >
< start="92.93" dur="5.5"> Usoro ahụ dum dị ihe dị ka mmadụ 7,000, ọ bụ ezie na ihe dị ka 114,000 ebi akwukwọ ga >
< start="98.43" dur="4.2"> na-agabiga na ọnụ ụzọ kwa afọ - nke ahụ bụ ihe dịka 312 kwa ụbọchị. >
< start="102.63" dur="2.11"> Nke a bụ ebe ọrụ juru, nke ahụ bụ n'ezie. >
< start="104.74" dur="3.48"> N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụ naanị ụlọ mkpọrọ 7th kachasị ukwuu na United States. >
< start="108.22" dur="3.64"> Imirikiti ndị mkpọrọ agaghị anọ ogologo oge ebe ahụ, oge nkezi na sistemụ niile >
< start="111.86" dur="4.07"> bụ naanị ụbọchị iri abụọ na asatọ, ma ị ga-ahụ ndị mmadụ ndị cherela ikpe ikpe ogologo oge >
< start="115.93" dur="1.74"> afọ ise. >
< start="117.67" dur="4.229"> Nke a na-ewetara anyị n'otu n'ime nkeji, otu ebe na-adaba n'isi akụkọ kachasị >
< start="121.899" dur="1.151"> n'ihi ajọ ọnọdụ ya. >
< start="123.05" dur="4.98"> A na-akpọ ya Njide Ọnwụnwa, ma ọ bụ oge ụfọdụ ana - akpọ ya Main Jail. >
< start="128.03" dur="3.34"> Ọ na-abụkarị ihe ruru mmadụ 1,700 n'otu oge. >
< start="131.37" dur="3.83"> Imirikiti ndị mmadụ nọ ebe ahụ ka bụrụ ndị nyochaghị akwụ ụgwọ ebe ọ bụ na egosighi na ha mere eme >
< start="135.2" dur="2.77"> ikpe mara, mana ichere ụbọchị ikpe ahụ nwere ike were ọtụtụ afọ. >
< start="137.97" dur="3.96"> Ọ dịghị mfe idozi mgbe ụdị limbo a dị, ma ọ bụrụ na ị na-agafe sel ndị ọzọ >
< start="141.93" dur="2.89"> ala ụfọdụ ị ga-ahụ etu ihe siri gbasa. >
< start="144.82" dur="3.559"> O nwere ndị mkpọrọ kwụsịrịla ịlụ ọgụ maka ikpe ha maka na ha chọrọ naanị ịnweta >
< start="148.379" dur="3.781"> pụọ ebe ahụ, na-emeghị ihe ọjọọ ma ọ bụ na ọ nweghị, ha chọrọ ịbanye n'ụlọ mkpọrọ. >
< start="152.16" dur="3.7"> Ala ndị kachasị njọ bụ ebe a na-echekwa ndị omempụ kachasị dị ize ndụ na ndị ahụ >
< start="155.86" dur="1.22"> ala ise na isii. >
< start="157.08" dur="4.44"> Mkpụrụ ndụ ebe a na - anọkarị ebe ọ bụla site na ụmụ nwoke iri na ise ruo iri abụọ na ise, n'ime ndị otu a, enwere >
< start="161.52" dur="1.249"> ụdị nhazi. >
< start="162.769" dur="4.382"> Dị ka ụmụ nwoke nọ ebe ahụ na-enwe mmasị ikwu ọtụtụ ihe, ọ bụ ndụ nke kachasị mma, yabụ ọ bụrụ na ịnweghị >
< start="167.151" dur="2.599"> onye na-alụ ọgụ nwere ike ịnwe oge siri ike. >
< start="169.75" dur="2.6"> Chọrọ ụfọdụ ụyọkọ, ị ga-alụ ọgụ maka ya. >
< start="172.35" dur="3.49"> Ọ dị mma, ị chọghị ịnwe ọnọdụ kachasị njọ na ụlọnga, mana gịnị ga - eme ma ọ bụrụ na mmadụ dị >
< start="175.84" dur="1.02"> na-ewere ngwongwo gị? >
< start="176.86" dur="2.599"> Dị ka otu onye mkpọrọ nọ ebe ahụ kwuru, “Ana m erigbu ndị na-adịghị ike.” >
< start="179.459" dur="3.691"> Ọ bụrụ na ịlụ ọgụ maka ihe gị, ị ga-enwe ọkụ mmụọ nke oge ụfọdụ, anyị na-ekwu na ọ bụ >
< start="183.15" dur="1.19"> ndị ọjọọ. >
< start="184.34" dur="4.72"> Ọ bụrụ na ị gbagọọ agbagọ, a ga-eti gị ebe ọ bụla ị na-aga ọ gwụla ma etinyeghị nchekwa. >
< start="189.06" dur="3.899"> Dịka onye mkpọrọ ọzọ kwuru na N'ajụjụ ọnụ ụbọchị mbụ n'ụlọ nga gị ị ga-alụ ọgụ >
< start="192.959" dur="2.301"> maka na ha choro ilepu gi anya dika nwoke. >
< start="195.26" dur="1"> Mana gịnị mere? >
< start="196.26" dur="3.38"> Nzaghachi ya bụ ma ọ bụrụ na ịlụghị ọgụ ọ bụ ihe ịrịba ama na ihe adịghị njọ na gị. >
< start="199.64" dur="2.269"> Eleghị anya ị bụ agwọ, maka na ịchọghị ịlụ ọgụ. >
< start="201.909" dur="4.151"> Ọ dị ka enweghị ezi uche, mana onye mkpọrọ kwuru na ndị a bụ iwu, nke ahụ bụ koodu ahụ. >
< start="206.06" dur="4.04"> Ihe dị mkpa bụ na ndị mkpọrọ enweghị ike ịkọwapụta nke ọma na iwu nke koodu ahụ. >
< start="210.1" dur="4.67"> Otu Ihọd kọwara na ọ bụrụ na mmadụ anaghị alụ ọgụ otu otu na nrube isi nye Jehova >
< start="214.77" dur="2.87"> codemata mkpụrụ ndụ niile nwere ike iti onye ahụ ihe. >
< start="217.64" dur="3.33"> Mgbe ụfọdụ, a nwere ike ịpịa nwoke ihe maka obere mmejọ, yana oge ụfọdụ ọ ga-abụrịrị >
< start="220.97" dur="2"> ebubo nke ihe ọ na-emeghị. >
< start="222.97" dur="1.5"> “Lenye zuru nri m?” >
< start="224.47" dur="3.03"> Ọ dịghị onye zaghachi, ike gwụkwara nke ahụ. >
< start="227.5" dur="1.849"> I nweghị ike, ị ga - ata ụta. >
< start="229.349" dur="2.851"> O gha eme ya, n’ihi na o ghaghi ida ihu ma o buru na o meghi. >
< start="232.2" dur="2.7"> Dị ka onye ọ bụla na-ekwu na ebe ahụ, naanị ị ga - alụ ọgụ. >
< start="234.9" dur="4.039"> Ha nwere otutu ukpuru ederede edeghi ede, ha nakpo, otu bu GABOS. >
< start="238.939" dur="3.281"> Nke ahụ pụtara, “Egwuregwu Egosighi na Sympathy”. >
< start="242.22" dur="3.82"> N’adịghị ka ụfọdụ ụlọ mkpọrọ gọọmenti etiti, o yighị ka ị ga-ewere gị n'okpuru nku onye ọ bụla. >
< start="246.04" dur="4.059"> Jail bụ ụzọ gladiatorial karịa ụlọ mkpọrọ, n'agbanyeghị na anyị anaghị anụkarị ihe gbasara obi ọjọọ >
< start="250.099" dur="1.081"> nke usoro mkpọrọ. >
< start="251.18" dur="4.01"> Naanị banye na nnọkọ ebe ndị mkpọrọ nọbu na-ekwu maka ahụmịhe ha na mgbazi >
< start="255.19" dur="3.53"> sistemu ma ị ga-ahụ ọtụtụ n'ime ha na-ekwu n'ụlọ mkpọrọ ka njọ. >
< start="258.72" dur="4.55"> Ihe edoghi anya bu na otutu ndi mmadu enwetabeghi ikpe mara ma onwere ha mmoo >
< start="263.27" dur="2.01"> ka njọ ma na-eche ihe egwu dị iche iche ihu. >
< start="265.28" dur="4.35"> Ndị na-ebu ụzọ na-atụ ụjọ oge niile na ọtụtụ ọnọdụ ha kwesịrị ịdị; nke uche >
< start="269.63" dur="4.68"> ịrịa ọrịa ịbanye na ebe ahụ; nri dị egwu; mkpụrụ ndụ ndị ahụ ruru unyi ma ha ga-anọ karịa >
< start="274.31" dur="1.3"> n’oge ha n’ụlọ nga. >
< start="275.61" dur="3.36"> Ga-ahụ ọtụtụ ndị mkpọrọ na-ekwu na ha ga-eme "mgbọ" naanị iji pụọ na nke ahụ >
< start="278.97" dur="1"> helhole. >
< start="279.97" dur="1.669"> Bullet bụ otu afọ n'ụlọ mkpọrọ. >
< start="281.639" dur="3.121"> Kedu ihe kpatara esemokwu ga-eji bụrụ ọnọdụ ọjọọ n'ọnọdụ ụlọ, ị nwere ike ịnọ na-eche. >
< start="284.76" dur="3.159"> Ọ dị mma, e keghị ha ka ha debe ogologo oge. >
< start="287.919" dur="4.191"> Nsogbu a bu, obuna odi nkpa nwere ike ibu oku oku ma ndi mmadu na eme otutu ihe kar a >
< start="292.11" dur="2.149"> na-egbu oge ma ọ bụrụ na ikpe ha na-egbu oge. >
< start="294.259" dur="2.171"> Risonlọ mkpọrọ kwesịrị inye ụdị nkasi obi… >
< start="296.43" dur="4.72"> Risonlọ mkpọrọ bụ hel na uru, ụlọ mkpọrọ na-enwe ụfụ mgbe niile na pọgatrị na akụkụ kachasị njọ >
< start="301.15" dur="1.859"> ị maghị ụzọ ọ ga-esi pụọ. >
< start="303.009" dur="4.111"> N'ihi nke a, ndị mkpọrọ na-abụkarị ndị obi ọjọọ, na-ewe iwe, na-ewe iwe, na mgbe ụfọdụ >
< start="307.12" dur="3.63"> nzuzu dị larịị mgbe ọ gafesịrị ọnwa ọnwa-18 nke ọnwa-ọcha. >
< start="310.75" dur="3.13"> Ihe niile ahụ a na-ekwu, were ya na a ga-eziga gị n'ọnọdụ ọjọọ ndị a? >
< start="313.88" dur="4.379"> Ka anyi laghachitere gi na eburu gi rue ulo nke 6 na Miami. >
< start="318.259" dur="3.861"> Otu onye n'ime ụlọ mkpọrọ na-apụ apụ, ndị nche ahụ ekwetakwa na ha enweghị ike ịza ya >
< start="322.12" dur="2.03"> ime ihe ike ọsọsọ ịkwụsị ya. >
< start="324.15" dur="2.57"> Ha kwenyere na ha hapụrụ ndị mkpọrọ ahụ na Koodu ha. >
< start="326.72" dur="3.6"> Ndị nche ahụ kwuputara n’ihu ọha na enweghị ihe ha nwere ike ime gbasara nnukwu iti ihe, >
< start="330.32" dur="1.37"> izu, ohi. >
< start="331.69" dur="3.34"> O ghaghi ezu n'ime ha ịnọ ebe niile ma hụ ihe niile. >
< start="335.03" dur="4.17"> Ozugbo onye nche ahụ pụọ, ịhapụrụ gị ịlụ ọgụ megide ala nke 5 na nke isii nke >
< start="339.2" dur="2.469"> jọrọ njọ, ụlọ aja aja ochie. >
< start="341.669" dur="1"> Mana gịnị mere? >
< start="342.669" dur="1.361"> Gini mere ha adighi enwe ike idi? >
< start="344.03" dur="2.729"> Otu onye mkpọrọ zara nke ahụ, na-asị, "Koodu bụ koodu ahụ." >
< start="346.759" dur="1.19"> Kedu ihe nke ahụ pụtara? >
< start="347.949" dur="3.981"> Ọ pụtara na ọ bụrụ na mmadụ akwanyereghị onye ị na-alụ ọgụ, ị nyara ụkwụ. >
< start="351.93" dur="4.2"> Naghị eso mmadụ tụgharịa uche maka na ebe a abụghị ebe ezi uche dị na ya ị ga-amalite. >
< start="356.13" dur="4.349"> Ha na-ekwu, ndị mmadụ na-abụghị n'okporo ụzọ, anaghị aghọta koodu n'okporo ámá. >
< start="360.479" dur="3.681"> Kinddị okike ọdịda ọdịda anyanwụ a laghachiri n'ihe ndị sayensị kpọrọ, 'ọdịbendị >
< start="364.16" dur="1"> nsọpụrụ. ” >
< start="365.16" dur="4.09"> Na-elelị nwoke, ị na-alụ ọgụ, ị na-amịrị mma agha, were ebe iri wee gbaa. >
< start="369.25" dur="4.069"> N'ime ụwa anyị, anyị sitere n'ihe a kacha wee pụta, mana n'ime ụlọ mkpọrọ >
< start="373.319" dur="3.231"> Koodu a, na nsọpụrụ nke ọdịnala a, ka juputara. >
< start="376.55" dur="4.18"> N'elu ohi na ịlụ ọgụ Main Jail na Miami ka akpọrọ nke kachasị njọ >
< start="380.73" dur="3.23"> Na America maka ụdị mmekpa nwoke ndị ọzọ. >
< start="383.96" dur="3.84"> Ihe ndị na-emenye ụjọ nwere ike ime mgbe ndị nche na-eche naanị sel n ’otu elekere. >
< start="387.8" dur="3.54"> A na-ahapụkarị ndị mkpọrọ na-eri ihe dị ka anụ oriri n'etiti ndị na-eri anụ. >
< start="391.34" dur="4.09"> Obi dị m ụtọ na ụlọ mkpọrọ ahụ emeela ọtụtụ ndozi n'ime afọ ole na ole gara aga, otu na-abawanye ụba >
< start="395.43" dur="2.269"> arụnyere igwefoto. >
< start="397.699" dur="4.44"> Mgbe ahụ enwere okwu banyere ụlọ mkpọrọ a na ọtụtụ ndị na-a drugsụ ọgwụ mmụọ. >
< start="402.139" dur="4.241"> A na-alụkarị ọgụ n'ụlọ mkpọrọ mgbe onye ọrịa na-arịa ọrịa na-eme ihe n'ụzọ ndị ọzọ nọ n'ụlọ mkpọrọ >
< start="406.38" dur="1"> ọ masịghị gị. >
< start="407.38" dur="3.88"> Dị ka Marshall Project si kọọ, “jaillọ nga Miami bụ ụlọ ọrụ kachasị maka >
< start="411.26" dur="1.7"> ndị isi na-arịa ọrịa uche na Florida. ” >
< start="412.96" dur="4.42"> Ndị mmadụ na-arịa ọrịa ụbụrụ na-abụkarị ndị na-eri anụ, na-ejedebe na ụmụ nwoke iri abụọ na-anọdụ ala >
< start="417.38" dur="1.39"> tụgharịa aka ha. >
< start="418.77" dur="2.23"> Otu a ka esi ahazi ịwepu ego. >
< start="421" dur="2.58"> N'ụbọchị ọ bụla, ụmụ nwoke na-agagharị ma na-esighị ike. >
< start="423.58" dur="2.25"> Ọ dị ka ọnụ ụzọ na-emegharị ọbara, nke jupụtara n'ọbara. >
< start="425.83" dur="4.18"> N’ezie, enwere otutu ihe ike nke na Ngalaba nke ikpe kwuru na Miami-Dade >
< start="430.01" dur="5.409"> Ndị mkpọrọ na ndị nche na ndị nche nwere ọtụtụ ihe ize ndụ. >
< start="435.419" dur="1.84"> Ihe a ga - eme, ka ngalaba ahụ kwuru. >
< start="437.259" dur="4.771"> Afọ ole na ole gara n'ụlọ mkpọrọ chere ọtụtụ nyocha mgbe mmadụ asatọ nwụrụ naanị n'ime ọnwa ise. >
< start="442.03" dur="5.1"> Ndi DoJ kwuru na ọnwụ atọ nke ndị nwere ọgụgụ isi na-akpaghasị nsogbu. >
< start="447.13" dur="4.39"> Otu nwa nwoke nke nọ maka ịnya ụgbọ ala na-anabataghị wee banye na Satọdee wee nwụọ na-esote >
< start="451.52" dur="1"> Mọnde. >
< start="452.52" dur="3.869"> Abụọ abụọ nwụrụ n'ime otu izu, na onye kọmishọna kwuru na sistemụ a “agbajikwala.” >
< start="456.389" dur="4.601"> Ọ tụgharịrị na site na mmadụ asatọ ahụ nwụrụ na otu onye esiwo na mbara ala dapụta iji gbapụ ndị mkpọrọ >
< start="460.99" dur="1.76"> ndi n’eso ya n’azu iti ya ihe. >
< start="462.75" dur="1.62"> A kpọkwara Knight. >
< start="464.37" dur="4.04"> Mgbe ụfọdụ a na-akpọ ụlọ kachasị njọ, nke ahụ emechiwo, mgbe ụfọdụ a na-akpọ "gottenlọ Chefuru Echefu." >
< start="468.41" dur="3.979"> Ọ bụ ọkwa nke iteghete ebe e debere ọtụtụ ndị nwere ọgụgụ isi. >
< start="472.389" dur="3.861"> Nke a bụ ebe a na-ahapụkarị ndị mkpọrọ ma leghaara ya anya, n'ọtụtụ oge wee were ha >
< start="476.25" dur="1.55"> ndu nke aka. >
< start="477.8" dur="3.92"> Laa azụ n ’ụbọchị a, ndị mkpọrọ hiri ụra n’ala enweghị blanket, ọ bụ ezie na >
< start="481.72" dur="2.91"> ebe ndi ogwugwu a gha eme mmadu. >
< start="484.63" dur="3.759"> A hụrụ ụfọdụ ndị mkpọrọ ka ha na-a fromụ mmanya n’ụlọ mposi, ma mgbe nke a kụrụ ozi ọma ebe ahụ >
< start="488.389" dur="1.24"> A na-akpọ, "egwu". >
< start="489.629" dur="1.401"> Mkpu tiri mkpu ọha. >
< start="491.03" dur="3.65"> Mana ka ị nụrụ, nsogbu ka nwekwara mgbe onye nwere nsogbu iche echiche gbachiri nkịtị >
< start="494.68" dur="5.84"> na-ejikwa gladiators na ndị na-emegbu mmadụ n'okporo ụzọ nke oge a nke koodu ha kpachaara anya ghara inwe ụkpụrụ omume mmadụ. >
< start="500.52" dur="4.84"> Ọ bụghị ala niile dị njọ dịka akụkọ anyị kwurula, na oge ụfọdụ >
< start="505.36" dur="2.81"> ndị dị ize ndụ ma ọ bụ ndị na-enweghị nsogbu ga-ebi naanị ha. >
< start="508.17" dur="4.24"> Ka o sina dị, kwụsie ike n'otu n'ime ụlọ ndị ahụ dị elu n'ụlọ mkpọrọ ahụ ma ị ga-ahụ >
< start="512.41" dur="4.66"> kedu ka esi eme ka ejide ya na otu n'ime iwu ndị kacha sie ike n'ụwa. >
< start="517.07" dur="3.82"> Enwere nsogbu ndị ọzọ, nke ụdị ịpụ iche. >
< start="520.89" dur="5.35"> N’afọ 2019, ọrịa bugara mmadụ iri na asaa n’ụlọ ọgwụ ebe a n’ihi ụfọdụ ọrịa mberede. >
< start="526.24" dur="1.76"> Ọtụtụ ndị ọrụ gbadakwara ya. >
< start="528" dur="1"> Kedu ihe mere? >
< start="529" dur="1.35"> Ọ dịghị onye maara n'ezie. >
< start="530.35" dur="3.66"> Akpọbatara ndị agha bọmbụ ahụ mgbe achọpụtara mmiri mmiri ọzọ, mana nke ahụ tụgharịrị >
< start="534.01" dur="1.09"> bụrụ ihe na-adịghị emerụ ahụ. >
< start="535.1" dur="4.23"> Eleghị anya ihe kpatara ndị mmadụ bidoro na-eme mkpọtụ bụ anwụrụ ọkụ si na mmiri nsị >
< start="539.33" dur="1"> ọgwụ. >
< start="540.33" dur="3.75"> Ọ bụrụ na anwụrụ anwụrụ ọkụ na-akwụ site n'ebe dị anya nwere ike ime ka mmadụ nwee obi ọgbụgbọ gbadaa, >
< start="544.08" dur="2.24"> kedu n’ụwa ha ga-anọ na-ese anwụrụ n’ebe ahụ? >
< start="546.32" dur="1"> Nri gas? >
< start="547.32" dur="2.36"> Ọ na-egosi etu esi ebe ahụ jọgburu onwe ya. >
< start="549.68" dur="4.37"> Anyị ga-ahapụrụ gị ntụle nke anyị hụrụ na peeji Facebook nwere ụlọ mkpọrọ a: >
< start="554.05" dur="1.12"> Nabata hel. >
< start="555.17" dur="4.77"> Ọ ga-akara mmadụ mma ịnwụ kama ịta ahụhụ na ntaramahụhụ nke ịnọ n'ụlọ mkpọrọ >
< start="559.94" dur="3.05"> n'ájá a na-asọ oyi, na-asọ oyi. ” >
< start="562.99" dur="4.21"> Don'tchọghị ka ezitere gị ozi na Miami Jail mana ịchọrọ pịa otu n'ime mmadụ abụọ a >
< start="567.2" dur="1"> vidiyo. >
< start="568.2" dur="4.36"> Ya mere, gaa lee vidio a ugbu a maka vidiyo ọzọ dị ukwuu sitere na Infographics Show ma ọ bụ nke a >
< start="572.56" dur="1"> n'ofe ebe a. >
< start="573.56" dur="3.48"> Can nwere ike ịhọrọ otu agbanyeghị wee bulie ma gaa lee vidiyo ọzọ ugbu a! >